လုံးတောင့်ကြိတ်စက်လက်စွပ် ၎င်းသည်အမှုန့်ကုန်ကြမ်းများကိုတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များအဖြစ်သို့ကျရောက်စေရန်နှင့်ငါးအစာလေးများနစ်မြုပ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလုံးကြီးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။. ဤကြီးမားသောလုံးလေးကြိတ်သည်အဓိကကိရိယာများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည် အစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို. ဒါဟာ 1-20t / h ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သော ၁.၅ မီလီမီတာမှ ၁၂ မီလီမီတာအထိတောင့်အရွယ်အစားကိုလုပ်နိုင်သည်။ အကြီးစားလုံးလေးများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပူပြင်းတောင့်စက်များ၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။. ပြားချပ်ချပ်သေတောင့်ကြိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်, ကြီးမားသောလုံးလေးများသည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာမပျံ့နှံ့သင့်ချေ။.
သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်လုပ်သောငါးအစာတောင့်များနှင့်ကြက်၊. ၎င်း၏အမည်ကိုဖော်ပြထားသကဲ့သို့, နစ်မြုပ်နေသောဤငါးအစာတောင့်စက်သည်ဆလင်ဒါပုံသေသေသပ်ပြီးဒေါင်လိုက်တပ်ထားသည်, ပြားချပ်ချပ်နှင့်အရေပြားထက်သေခတ်သေတ္တာကဲ့သို့ဖြစ်သည်. သင်အမှုန့်ကုန်ကြမ်းများကိုနစ်မြုပ်နေသောငါးအစာကြိတ်တံခါးထဲ၌ထည့်လိုက်သည်, သူတို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအမြန်နှုန်းအေးစက်မှတဆင့်လုပ်ရန် surge bin ဖြင့်သူတို့ကိုသင်ကျွေးနိုင်သည်. နောက်ဆုံးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အတောင့်တင်းစက်အတွင်းသို့ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းအတွက်ဝက်အူစက်တစ်ခုသည်သိသာထင်ရှားသည်.
extrusion die သည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ပြီး rollers စီးရီးများဖြစ်သည်. roller နှင့် die နှစ်မျိုးလုံးသည်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးပေါ်တွင်လည်ပတ်သည်, ထို့ကြောင့် roller ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဖက်များသည်သေမျက်နှာပြင်ကိုတူညီစွာအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်ထားသည်. ထို့ကြောင့်, ကုန်ကြမ်းများကိုလက်စွပ်သေတ္တာများနှင့် roller များကချုံ့ခြင်းကိုမဖြတ်နိုင်ပါ, အရာလက်စွပ်သေဆုံးနှင့် roller နှစ် ဦး စလုံး၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးချဲ့. လုံးလေးများလုပ်သည့်အခါ, ကုန်ကြမ်းများကိုလက်စွပ်တွင်းရှိတွင်းထဲသို့ချုံ့သည်. ထို့အပြင်လက်စွပ်ဖြင့်သေဆုံးသည့်အပြင် roller များစွာသည်ပေါ်ထွက်လာသောတောင့်တင်းများကိုတူညီသောအရှည်သို့ဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်. ထိုအခါ, အဆိုပါယူနီဖောင်းလုံးလေးများကြီးမားသောအစာကျွေးတောင့်စက်ထဲကချပစ်နေကြသည်.
လက်စွပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ Die ဒီဇိုင်း
၎င်းသည်ပြားချပ်ချပ်ပုံနှိပ်ခြင်းထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သောအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည် roller skip မှမခံစားရခြင်းဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် roller နှင့် die အကြားထိတွေ့မှုအချက်အကြားမြန်နှုန်းကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, roller skip ပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးများစက်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်. Ring die systems သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသေတ္တာနှင့် roller များအကြားအမြန်နှုန်းကွဲပြားမှုမရှိသောကြောင့်ဤပြfromနာမှမခံစားရပါ.
•ကြီးမားသောစွမ်းရည်: အကြီးစားလုံးလေးများသည်အလွန်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အထူးပြုသည်, ကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှု. ၎င်း၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်အကွာအဝေးကနေဖုံးလွှမ်း 1 တစ်တန် / နာရီ 20 တစ်တန် / နာရီ. ပိုကြီးတဲ့စွမ်းရည်လုံးလေးစက်ရုံအားဖြင့်သဘောပေါက်သည် အများအပြားလက်စွပ်ချိတ်ဆက်လုံးလေးများသေ အပြိုင်၌, ကြောင်းအမှု၌, သင်တစ် ဦး စွမ်းရည်အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 20 တစ်နာရီတစ်တန်.
မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ: အသေခံတောင့်ကြိတ်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ကြီးမားသောငါးအစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်လက်စွပ်၏ဖိအားသည်အလွန်မြင့်မားသဖြင့်၎င်းပြုလုပ်သောအတောင့်သည်ရှိသည် ပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆ နှင့် ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်. သိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားသည်, ကရှိပါတယ်ပိုမိုမြင့်မားလောင်ကျွမ်းခြင်းတန်ဖိုးကို.
•ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်: ကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွပ်ကြီးမားသောလုံးလေးများကြိတ်ကိုအသုံးပြုသည်သေသည် ဂျာမန်ဝက်ဝံနှင့်ရေနံတံဆိပျ ဒါကြောင့်အခြားသူများထက်အများကြီးပိုတည်ငြိမ်သည်. ဒါ့အပြင်, သေးငယ်တဲ့လုံးလေးများကြိတ်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, pelletizing ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်အတွင်း, နှစ်ဖက်စလုံးကတူညီတဲ့အကွာအဝေးကိုရွှေ့တယ်, ဒါကြောင့် roller နှင့်သေပါ အညီအမျှဝတ်ဆင်, ကအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်.
•မတူညီသောကုန်ကြမ်းများမှလုံးလေးများပြုလုပ်သည်: ငါတို့ လက်စွပ်ကြီးမားသောလုံးလေးများကြိတ်သေသည် ပျော့ပျောင်းသောသစ်သားကို process နိုင်ပါတယ်, မှတ်တမ်းများ, အခက်များ, အခေါက်, သစ်ပင်များ, ပြောင်းဖူးမုန့်ညက်,မြက်မုန့်ညက်,ကောက်ရိုးစာ,အရိုးမုန့်ညက်,မြက်ပင်ထမင်း, မြက်ပင်များ, မြေပဲခွံ, ဆန်ခွံ,စသည်တို့. အားလုံးပစ္စည်းလက်တွေ့ကျကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကသက်သေပြနေသည်.